भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: गोवामा फेनी खोजेको कल्पनामा डुब्दै !!
गोवामा फेनी खोजेको कल्पनामा डुब्दै !!
अहिले गोरखपुर, ईन्डियामा ट्रैनको टिकेट आर ए सि मा बुक भएपनी बर्थमा चेन्ज नभएर पटयार लागिरहेको बेला पुने शुक्रबार पुगेपछी नयाँ प्लान गोवाको लागि बुन्नु छ । मंगलबार पुने बाट रिटर्न टिकेट हुँदा सेडुयल टाइट छ । अनी २ दिनको लगातार ट्रेन सफर पछीको गलाइले कस्तो निर्णय गराउला ! तर यसमा अहिले नै केही भन्न सकिदैन - नट फिक्स यट ! ३१ अगष्टमा पुने, भारतमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रोबोट प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन गैरहेको बेला नेपाली टिमलाई पनि शुभकामना छ , जापान, कोरिया र चाइना जस्ता देशलाई पराजित गाह्रोस भनेर ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 4:12 AM
गोइङ टु गोसाइकुण्ड !
आँखामा अन्नपूर्ण !
गुगल गाईड !